ကုလားကာနောက်ကွယ်သို့ ၀င်ရောက်တော့မည့် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ကုလားကာနောက်ကွယ်သို့ ၀င်ရောက်တော့မည့် …
ကုလားကာနောက်ကွယ်သို့ ၀င်ရောက်တော့မည့် …
Posted by maungmoenyo on Feb 7, 2011 in Politics, Issues |7comments
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ထုတ်စ အစိုးရသတင်းစာရှေ့မျက်နှာဖုံးတွေမှာ သမ္မတ နဲ့ ဒုတိယသမ္မတများ အဖြစ်အရွေးချယ်ခံကြသူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအပေါ်ထိပ်ဆုံးကနေ စစ်ဝတ်စစ်စားခန့်ငြားထည်ဝါစွာ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုအပေါ်စီးက ဖေါ်ပြထားတာကိုမြင်ရတော့ တယ်ပြီးလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီကြီးပါလား လို့ မောင်မိုးညိုနဲ့တကွ ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့က ဥဒါန်းကြူးရင့်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပါတ်သက်လို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြိးမတိုင်ခင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ဟစ်တလာအာဏာအထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကိုသတိရမိပါတယ်။ အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီး(၂)ယောက်ကတနေ့ အိမ်ဒေါင့်တခုမှာထိုင်ရင်း အိမ်နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားထဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးဟစ်တလာရဲ့ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စပြစ်ပြီးပြုံးကြတယ်ဆိုသတဲ့။ အဲါဒီအချိန်က ရုပ်ရှင်လောကမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့လူရွှင်တော် Charlie Chaplin နဲ့အတော်တူဆိုဘဲ။ ဒါကိုမြင်တော့အိမ်တနေရာကထိုင်နေတဲ့ ဟစ်တလာလူငယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြေးဖြစ်သူက မြင်သွားလို့ နာမယ်ကြီးSS လျှိ့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကိုသွာတိုင်လိုက်ပါတယ်။ အဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီးကို စစ်စုံထောက်တွေကဖမ်းပြီးနှိပ်စက်ကြလို့အတော်ခံလိုက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ခုလဲတပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ အရှိန်အ၀ါကို နိုင်ငံဥသြောင်တွေကတောင်မကျော်လွန်နိုင်ကြပါကလား။ ခုလဲသမ္မတလို့သာဆိုကြတယ်၊ တပ်ချုပ်ကြီးရဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကမလွတ်နိုင်ကြသေးပါလားလို့။
အချုပ်ပြောရရင် စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆိုပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဝေဟာရကျမ်းမှာ ဘယ်မှာမှရှာလို့မရတဲ့ စကားလုံးနဲ့ နိုင်ငံကိုဆက်ပြီး စစ်ပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်သွားမဲ့အစီအစဉ်ကို စတင်အသက်သွင်းနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာစံနှူန်းမမှီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်မို့ သက်ဇိုးရှည်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲဆိုတာလဲပြောရခက်ပါတယ်။ တခုဆိုးတာက ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုခွင့်ပြုရုံမက အားပေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတာကြောင့်၊ စစ်ဘိနပ်အောက်ကပြည်သူတွေ ဘယ်တော့လွတ်နိုင်ပါ့မလဲဆိုတာကိုရင်လေးစွာနဲ့စောင့်ကြည်ကြရဦးမှာပါ။
hi Maung Moe Nyo,
you are right, we don’t know, when real democracy come to Myanmar.
ဦးမိုးရဲ့ ခေါင်းစဉ်က မပြည့်စုံသေးဘူးဗျ၊ ကုလားနဲ့တရုတ်တို့ ပေါင်းကာပေးမှာမိုလို့ ကုလားတရုတ်ကာ နောက်ကွယ်သို့ ဝင်ရောက်တော့မည့် လို့ပြင်သင့်ပါသည်။
နားယောင်ပြီးမဲထည့်ခဲ့သူများ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်များကို (အထူးသဖြင့် အန်အယ်ဒီပဲ့ထွက် အန်ဒီအက်ဖ်များ) ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပြကြဖို့ ဖိအားပေးရန် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ၊ အမတ်များကိုလည်း ဒီမိုကရေစီရရင် အခုလိုပဲ ပေးသမျှနဲ့ ကျေနပ်ဖို့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးပြီးဖြစ်တယ်လို ပြောချင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ လမ်းဘေးက ရုပ်သေးပွဲလိုပါပဲ။
ရုပ်သေးဆရာမှာ အရုပ်က သုံးရုပ်သာရှိပါတယ်၊ အရုပ်တွေက ဘုရင်ရုတ်၊စစ်သူကြီးရုတ်၊တပ်သားရုတ်တွေပါ။
ထိုအရုပ်တွေနဲ့ပဲ အမျိုးမျိုး ဇတ်လမ်းပြောင်းကာ အသုံးတော်ခံ၍ ကြည့်ရူသူ ပရိတ်သတ် အပေါင်းတိုကို တင်ဆက်နေပါတော့သည်။
ထိုအခါ ကြည့်ရူသူ ပရိတ်သတ်အပေါင်းမှာ ညီးငွေ့လာ၍ အော်ဟစ်ကြလေသည်။
ထိုရုပ်သေးဆရာမှာ ပရိတ်သတ်ကြီး ဆူပူမှာစိုးသဖြင့် ခဏလေးစောင့်ပါခင်ဗျာ…နောက်ပြီးရင် (ဆူထက်ဆူ လူစွမ်းကောင်းတွေလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ)။
အဲဒီတော့ ကိုကြောင်ကြီးရေ..စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးသာစောင့်ကြည့်..(ဆူထက်ဆူ လူစွမ်းကောင်းတွေလာတော့မှာပါ။)
အေးဗျာ.ဘဲ့နယ်ဖြစ်တယ်မသိဘူး။ ခေါင်းစဉ်တင်တုံးကဒီလိုပါ…”ကုလားကာနောက်ကွယ်သို့ဝင်ရောက်တော့မယ့်တပ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ နဲ့ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ ပြောင်ယူမယ် ဟုဆိုခဲ့ကြတဲ့ အတိုက်အခံအမတ်မင်းများအကြောင်း”……..ရယ်လို့ပါ။
NDF အမတ်မင်း ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး (ယခင်သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းရဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးမြင့်စိုး၏သား) ရဲ့ ဆိုစကားအရတော့၊ လွှတ်တော်မှာ တော်တော်အကွက်စိအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုဘဲ။ ဘယ်လိုအကွက်စေ့တာလဲ…။ ဒါတော့ ကိုယ်လိုရာဆွဲ တွေးကြပါ။ ဒီနေ့သတင်းစာ ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာ တော့၊ လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်က အာဆီယံ နိုင်ငံများအတွင်းမှာသာမက၊ ကမ္ဘာမှာတောင် လွတ်လပ်မှုအရှိဆုံးလို့ ဆောင်းပါးရှင်မောင်ဒဲ့ဒိုး နဲ့ ဘကြီးဖြိုးတို့ကဆွေးနွေးသွားကြလေရဲ့။ အံ့သြစရာကောင်းတာက အဲ့ဒီသတင်းစာရှေ့ဆုံးမျက်နှဖုံးအပေါ်ဆုံးမှာ၊ သတင်းစာတခုလုံးကို လွှမ်းခြုံကြီးစိုးနေရာယူနေတာကတော့….ဒီမိုကရေစီလမ်းပြမြေပုံကြီးအပြီးတိုင်ရောက်ပြီးတာတောင်..ဆက်လက် အာဏာပိုင်စိုးနေတဲ့ တပ်ချုပ်ကြီး ရဲ့ပုံကို မြင်ရတော့ မောင်မိုးညို လဲ တော်တော် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားတယ်။ သတင်းစာတစောင်ထဲကပေးတဲ့အဓိပ္ပါယ်(၂)မျိုး……..
ဦးမိုးညိုပြောခဲ့တာတွေ ပြည့်စုံမှန်ကန်နေတော့ ပြောစရာမကျန်တော့ပါဘူး ရင်လေးစွာနဲ့စောင့်ကြည်ဖို့ပဲလိုတော့တယ် ၁၆နှစ်အထက် နဲ့ ၂၅ နှစ်အောက်ကလေးတွေကို နှစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်စေချင်တယ်ဗျာ……….
ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်-No Vote Campaign-လုပ်ခဲ့တယ်။
တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူတသန်း Campaign မျိုးလုပ်နိုင်ရင်တော့၊
ဒါကိုNDF နဲ့ DP သစ္စာဖေါက်များကလူတွေကိုမဲထည့်ကြဘို့၊မဲရုံလာကြဘို့ဆော်သြောတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေကမဲရုံမှာလူအနည်းငယ်လဲတွေ့ရော၊Thank You Very Much ဆိုပြီးကြိုမဲများနဲ့အနိုင်ပိုင်းတာပါဘဲ။
မဲရုံလူလုံးဝမရှိဘူး၊NDF/DP/နဲ့ အသီးပုဂ်ဂလများလဲမပါဘူး၊ မဲပေးဘို့အော်တာလဲဗိုလ်သန်းရွှေတဦးထဲ
NDF/ DP တို့ဟာအဓိကတရားခံတွေပါဘဲ။ဗိုလ်သန်းရွှေကိုအခုထက်ထိကူညီပြီးအရှက်မရှိ
ကားလိပ်ကာနောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်မည့်ဇာတ်ဆရာ လို့ အမည်တပ်မလို့လား ဦးမိုး.
ရုပ်သေးပွဲကို တီထွင်သူတွေက မြန်မာဆိုတော့ နေရာတကာ ရုပ်သေးရုပ်တွေကို မြင်ရမှာသေချာပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်း မိဘနဲ့သားသမီး၊ ဆရာနဲ့တပည်၊ အထက်လူကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကိုယ်ခိုင်းရာလုပ် ကိုယ့်စိတ်သဘောကျ ချယ်လှယ်စေတတ်ပြီး ပြန်မပြောရ၊ ပြောသမျှ ခိုင်းသမျှ နာခံ အတွန့်မတက်နဲ့ ဆိုတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို မှတ်ယူပြီး ဆက်ဆံခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ မဖြစ်နိုင်လို့ ပြန်ပြောရင် အချက်အလက်ကျကျ ပြန်ရှင်းပြရင်တောင် ကလန်တာလား ရိုင်းစိုင်းတယ် လူကြီးမှန်းမသိဘူးလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာ ဒီစနစ်တွေ စိတ်ဓါတ်တွေကို လက်မခံချင်ကြတော့ဘူး။ မှန်ကန်နည်းလမ်းကျတဲ့ စနစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လက်ခံလာကြလို့ ပြောင်းလဲဘို့ကြိုးစားနေကြတယ်လေ…